Tantara: Nafenin-dRahaba Ireo Mpisafo Tany - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Rehefa tonga tao Jeriko ireo mpisafo tany, dia nankao amin’ny tranon-dRahaba. Nisy olona iray anefa nilaza tamin’ny mpanjakan’i Jeriko hoe: ‘Nisy Israelita roa tonga atỳ izao alina izao hisafo ny tany.’ Rehefa ren’ny mpanjaka izany dia naniraka olona izy ho any amin-dRahaba, ary nandidy azy izy ireo hoe: ‘Avoahy ireo lehilahy tonga ato an-tranonao ireo!’ Nefa i Rahaba dia nanaﬁna ireo mpisafo tany tao an-tafontranony. Hoy àry izy: ‘Tonga tatỳ amiko tokoa ireny lehilahy ireny, nefa tsy fantatro izay niaviany. Ary rehefa maizina ny andro, ka hohidiana ny vavahady, dia lasa nivoaka izy. Enjeho faingana izy, fa ho tratranareo!’ Ary dia nanenjika azy ireo ny olona.
Ahoana no nahatanterahan’ny fampanantenan’i Jehovah ao amin’ny Eksodosy 23:28, rehefa nanaﬁka an’i Jeriko ny Israelita? (Josoa 2:9-11)
Nahoana no tena zava-dehibe ny ﬁnoana, araka ny ohatr’i Rahaba? (Rom. 1:17; Heb. 10:39; Jak. 2:25)